Ejipta: Nampitandreman’ny fiarovam-pirenena ny bilaogera iray mba tsy hanohy hanoratra ao amin’ny aterineto · Global Voices teny Malagasy
Ejipta: Nampitandreman'ny fiarovam-pirenena ny bilaogera iray mba tsy hanohy hanoratra ao amin'ny aterineto
Voadika ny 23 Janoary 2019 7:21 GMT
Nampanantsoina tany amin'ny foiben'ny Fiarovam-pirenena ilay bilaogera Ejypsiana Abdel Rahman Fares, izay nomena tsiny noho ny asa sorany antserasera. Nampitandremana i Fares fa hosamborina izy raha mbola manohy mibilaogy, ary nangatahana mba hanajanona ny zavatra ataony amin'ny aterineto sy ivelan'ny aterineto.
Mibilaogy ao amin'ny Lesani Howa Qalami (ny lelako no peniko) i Fares. Tamin'ny zoma 25 Septambra 2009, nahazo antso an-tariby avy amin'ny Fiarovam-pirenena izy ary nametrahana fanontaniana maromaro mifandraika amin'ny bilaoginy, ary avy eo nampanantsoina tany amin'ny biraon'ny fiarovam-panjakana ao Fayoum (avaratr'i Cairo) izay misy an'i Fares ihany.
Nandany adiny efatra tao amin'ny foiben'ny Fiarovam-pirenena ity tanora bilaogera (25 taona) ity, izay nohadihadiana momba ny fitokonana natao tamin'ny volana Oktobra sy ny fomba fijeriny ara-politika.
Polisy telo no nanadihady an'i Fares, ny iray tamin'izy ireo niresaka taminy momba ny lahatsoratra iray niseho tao amin'ny bilaoginy mitondra ny lohateny hoe “Ireo izay hanao fety any am-ponja noho ny fiampangana ho mitia an'i Ejypta” izay nampahatsiahivin'i Fares tamin'ny mpamaky ny manjo ireo bilaogera voatazona, toa an'i Mous ‘ad Abu Fagr, Ahmad Abu Doma, Kareem Amer ary Hani Nazeer.
Ao amin'ny foiben-toeran'ny Fiarovam-panjakana, nasaina mba hampiato ny fikatrohany i Fares ary takalon'izany dia ho atao mpikambana ao amin'ny “sangany” ao amin'ny antokon'ny fitondrana izy, tolotra iray nolaviny tamim-pahalalam-pomba.
Taorian'ny famotsorana azy dia maro ireo bilaogera nitantara ny zava-niainan'ny naman'izy ireo, niantso ny hafa tsy handeha any amin'ny biraon'ny Fiarovam-panjakana rehefa hampanantsoina amin'ny alàlan'ny antso an-tariby izy ireo, satria tsy baiko ara-dalàna izany.
Efa nosamborina teo aloha tamin'ny taona 2007 sy taona 2009 i Fares. Ny fisamborana azy farany dia tamin'ny 5 aprily 2008, raha nizara taratasy kely miantso ny olona hidina an-dalambe sy hanohitra ny governemanta, ho ampahany amin'ny fitokonana 6 Aprily izy.